कांग्रेसलाई ‘नोकिया’ हुनबाट जोगाऔं - Samachar PatiSamachar Pati
कांग्रेसलाई ‘नोकिया’ हुनबाट जोगाऔं
‘यसपटक कांग्रेसको पराजयमा कांग्रेसजन खुशी छन्’
पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापतिज्यू,
सर्वप्रथम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तपाईंको नेतृत्वमा सफल हुनसकेकामा हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईंको यो कार्य अतुलनीय र प्रशंसनीय छ ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि तपाईंमाथि निर्वाचन गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री भनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको आरोपबाट तपाईं अब मुक्त हुन सफल हुनुभएको छ ।
हालै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको जय र पराजयभन्दा पनि लोकतन्त्रको जय भएको हुँदा निश्चय नै आज बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायत ती तमाम शहीदहरु, जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरे, तपाईंको भूमिकाप्रति गौरवान्वित होलान् ।
निर्वाचनमा हारजित हुन्छ । निर्वाचनप्रति समस्त विश्व जनमतको आकर्षण नै ‘कसले जित्ने र कसले हार्ने’ भन्ने हो । यो जितहार नै जनमत कतापट्टी भन्ने सूचक हो ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यस पटकको निर्वाचनको माध्यमबाट केन्द्रीय र प्रदेशको सत्ताबाट कांग्रेस टाढै बसोस् भन्ने अभिमत प्रकट गरे । हो, स्थानीय निर्वाचनमा भने कैयन ठाउँमा कांग्रेसले जितेको छ, यो भनेको अझै पनि कांग्रेसले राम्रो गर्न सक्छ कि भनी सहानुभूति विजय भएको हो ।
अब कांग्रेसको भविष्य यिनै जितेकाहरुले जनताबीच उदाहरणीय काम गरी देखाउँदा मात्र पुनर्जीवन पाउने हो । अन्यथा, फेरि वामहरुको असफलताबाट फाइदा लिएर कांग्रेस उठ्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको छैन ।
राजनीतिमा ‘स्पोर्टसम्यान स्पिरिट’को खुबै चर्चा हुने गर्छ । यो भनेको के होला ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको यौवनकालमा खेलकुदको महत्व थियो कि थिएन, म जान्दिनँ । तर, हामी बिराटनगरमा खुबै खेलकुदमा रुचि राख्थ्यौं र खेल्थ्यौं पनि ।
खेलकुदमा जित्नेलाई अहंकार हुन्छ र हार्ने सधैं सिक्ने सम्भावना बोकेर मैदानबाट बाहिरिन्छ । नेपालको निर्वाचनमा पनि जितहार भयो, नेपाली कांग्रेसले सोचेअनुरुप जित्न सकेन ।
तपाईं प्रधानमन्त्री र कांग्रेस पार्टी सभापतिको हैसियतले हार्नु भएको छ । तपाईं मात्र होइन नेपाली कांग्रेसको ‘ग्रस हार’ भएको छ । तसर्थ, यो हारलाई स्वीकार्दै तपाईंले जति चाँडो हुन्छ, सत्ता शान्तिपूर्वक जनताले रुचाएको गठबन्धनलाई सुम्पिने काम गर्दा राम्रो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । यसैमा तपाईंको जित छ ।
मलाई यो थाहा छैन कि तपाईंको कानमा सच्चा कांग्रेसजनको पदचाप र गुनगुनाहट पुगेको छ कि छैन । तसर्थ, म चिच्याएर तपाईं र कांग्रेस नेतृत्वसामु भन्छु, यसपटकको कांग्रेस पराजयमा कांग्रेसजन दुःखी छैनन् । खुशी नै छन् ।
यो खुशी परपीडक भएको कारण होइन । कांग्रेसभित्र कांग्रेस भएर बस्न गाह्रो भएर ‘स्वाभिमान र पहिचान’को लडाईंमा हार्दै गएको कारण भएको थियो ।
एकातिर देशमा पहिचान र अधिकारको लडाईं चल्यो । अर्कोतिर कांग्रेसमा त्यही लडाईं लड्न नसकी कांग्रेसजन छेउ-किनारामा पुगे, पार्टीभित्रै । कांग्रेस पार्टी कांग्रेसजनको आँखा अगाडिबाट खोसेर केही परिवारले, केही व्यापारीले, केही डनहरुले र केही दलालहरुले लुटेर लगेको टुलुटुलु हेर्न सच्चा कांग्रेसी विवश थिए ।
त्यति मात्र होइन, कांग्रेसलाई भारतले पनि आफ्नो दासझैं ठानेको धेरै कांग्रेसजनलाई मन परेको थिएन । तसर्थ, कांग्रेस पराजयका लागि अन्तरघाती नखोज्नु, यो त गिरिजाप्रसादलाई अपमान गरेको मात्र ठहर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु अहिले हरुवा उम्मेदवारहरुबाट लाञ्छना र अन्तरघातीको आरोप सुनिरहेका छन् । यस्तो विडम्बना कांग्रेसमा मात्र हुन्छ । यतिखेर देशभरिका हरुवा उम्मेदवारहरु म किन हारें र मेरा कमजोरीहरु के रहे भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा आफ्नै साथीमाथि छुरा चलाएर ‘बु्रटल’ चरित्र प्रदर्शन गर्दैछन् ।
विचरा ती कांग्रेस कार्यकर्ता, जो आफैं पेट पाल्छन्, लोकतन्त्रको रक्षार्थ निर्वाचनमा रुखलाई छातिमा टाँसेर केन्द्र र उम्मेदवारले गरेका तमाम गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै भोट माग्न आफू र परिवार लिएर निस्कन्छन् । तर पनि, अपमानित र गाली खानुपर्ने विडम्बना किन ?
एक पटक वामपन्थी उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताबीचको ‘कामरेडसिप’ हेर्नुहोस्, प्रमज्यू । अनि, अहिलेका अहंकारी र दम्भी कांग्रेस नेताहरुको चरित्र दाँज्नुहोस् । धन्य कार्यकर्ता छन् कांग्रेसका, जसले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कांग्रेसको भोट प्रतिशत र्झन दिएनन् । र, चारतारेको झण्डाको इज्जत जोगाए ।
कांग्रेसले निर्वाचनमा जित्ने अपेक्षा गरेको थिएन भन्ने तपाइर्ंको स्वीकारोक्ति सही छ, सत्य छ । तपाईं र मबीच भएका लामा संवादमा पनि मैले यस्तो छनक तपाईंबाट पाएको थिएँ ।
हो, सम्भव नै थिएन कांग्रेसले जित्न यो निर्वाचनमा । किनकि, अहिलेको निर्वाचन नेपालमा न कांग्रेसले लड्यो, न माओवादी केन्द्रले नै लड्यो, न त अरु दलहरुले । सम्पूर्ण निर्वाचनप्रति ध्यान नेकपा एमालेको मात्र थियो ।
यो त प्रदेशसभामा एमालेका हस्तिहरुको उम्मेदवारीबाटै प्रष्ट भइसकेको थियो । त्यस्तै, नेकपा एमालेले ६० ठाउँ छाडेर पनि कांग्रेससँग ठक्कर लियो, पपुलर भोटमा समेत । यो चानचुने तयारीले हुने कुरा थिएन ।
कांग्रेसको पराजयमा कांग्रेसजन दुःखी छैनन्, खुशी नै छन् । र, त्यो खुशी कांग्रेसभित्र कांग्रेस भएर बस्न गाह्रो भएर ‘स्वाभिमान र पहिचान’को लडाईंमा हार्दै गएकाले हो
प्रत्यक्षमा स्विप गर्‍यो, समानुपातिकमा समानान्तर आयो, एमाले । निश्चय नै यो एमालेको दिग्विजय हो, खड्ग ओलीको सफल नेतृत्व हो । खड्ग ओलीलाई निर्वाचनमा विजयी भएकामा बधाइका साथ भावी दिनमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न शुभकामना पनि ।
एमालेको जस्तै विजय मधेशकेन्दि्रत दलहरुले प्रदेश-२ मा गरे । एमालेका ओलीसँग नेपाली राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा थियो, त्यो नेपाली जनताबीच बिक्यो । नयाँ राष्ट्रवादको लहरको प्रभावकै कारण पहाडमा कांग्रेसले जम्मा दुई ठाउँ मात्र जित्यो, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक । एउटा रसुवामा र अर्को शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा ।
मधेशी दलहरु पहिचान र अधिकारको लडाईं लिएर निर्वाचनमा गए । कांग्रेस भने म विद्याथी हुँदा चार दशक अगाडि प्रयोग हुने ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’को विगुल लिएर निर्वाचनमा गयो ।
मैले पाँच दर्जन युवालाई अधिनायकवाद शब्दको अर्थ सोधें, कसैले भन्न सकेनन् ।
यस्तो मिति सकिएको औषधी लिएर कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा मेरो पुस्ताले त बुझ्ला, अहिलेका युवाले यो शब्दको उच्चारण पनि जान्दैनन् । बुझ्न सकिन्छ, कांग्रेसका नेताहरु विचार र व्यवहारबाट आम नेपाली जनतासँग ‘डिट्याच’ भए ।
वाम गठबन्धनको तयारी देशभित्रका शक्तिहरुले मात्र गरिरहेका थिएनन्, बाह्य शक्तिहरुलाई पनि नेपालका वामशक्तिहरुको चुनावी गठबन्धन आवश्यक भएको थियो । एकपटक शान्त कूटनीतिबाट आक्रामक कूटनीतिमा रुपान्तरित चीनको सरकारीस्तरबाट निसृत विचार र नेपालमा भएका चिनियाँहरुका बाक्ला भेटघाटलाई स्मरण गर्नुहोस् त ! अनि, झस्कनुपर्ने हुन्छ तपाईंले कि कसरी आफ्नो काखबाट माओवादी केन्द्रलाई एमालेका स्मार्ट नेता ओलीले थुतेर लगे भनेर ।
राजनीतिमा नेतृत्व स्मार्ट छ भने निर्वाचन परिणामलाई ‘आन को तान’ फरक पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण खड्ग ओली भए । तर, के ओली रातारात नेता भएका हुन् ? निःसन्देह होइनन् । नेकपा एमालेको तयारी थियो, चुनावमा ।
‘ओली ब्रान्डको इक्युटी’ ‘हाई’ पनि अचानक भएको थिएन, तयारीका साथ भएको थियो । यस्तै तयारी भारतमा आजभन्दा झण्डै चार वर्षअघि गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले गरेका थिए । के गरे ओलीले मोदीजस्तो ? संक्षिप्त तर सुक्ष्म रुपमा हेरौं ।
भारतमा पियुष पाण्डे भन्नेको नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदीलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने योजना बनेको थियो, ५० दिनभित्र सन् २०१४ को निर्वाचन अगाडि । निर्वाचनमा जनतामाझ कसरी, के लिएर पुग्ने भन्ने सोच र कार्यक्रमबारे हिजोआजको निर्वाचनमा बडो महत्व दिने गरिएको छ ।
तपाईंका सल्लाहकारहरुलाई यो कुरो पक्कै ज्ञान हुनुपर्ने हो । यही प्रकरणबाट विगतको असफलताको दोष सबै भारतीय कांग्रेसलाई ‘जनता माफ नहीं करेगी’ भनेर अगाडि सारियो, भारतीय जनता पार्टीबाट । दोस्रो, ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ भनेर ‘होप’ सिर्जना गरियो, आम भारतीयबीच । अनि, गुजरात मोडेलको सफल नेता राष्ट्र निर्माणमा छ भनी नरेन्द्र मोदीको खुबै प्रचार गरियो ।
ठीक यही शैली र प्रचार गरे नेपालमा पनि, ओलीलाई ब्रान्डिङ गर्नेहरुले । कांग्रेससँग न ब्रान्ड थियो, न कार्यक्रम ।
नेपाली कांग्रेसले तीन दशकदेखि सत्ताको नेतृत्व गरेर अस्थिरता मात्र दियो देशमा भनेर एमालेद्वारा प्रचार गरियो । र, यो प्रचार नेपाली जनताले सही ठाने । कांग्रेससँग एमालेलाई दिने उत्तरको कमी थिएन । तर, योजनावद्ध कार्यक्रम र संवाद शैली कांग्रेससँग थिएन ।
त्यसैले कांग्रेसले यसलाई चिर्न सकेन !
नेपालको समृद्धिको वाधक कांग्रेस हो भन्ने प्रचार पनि खुबै भयो । यी दुवै प्रचारको बीचबाट ‘वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी समृद्धि, शान्ति र स्थिरता दिन्छौं’ भन्ने नारा एमालेद्वारा अगाडि सारियो ।
कोर मधेश, जहाँ पहिचान र अधिकारको लडाईं थियो, त्यहाँबाहेक नेपालभर एमालेद्वारा गरिएको प्रचारशैली काम लाग्यो । फेरि यी दुवै आयामलाई नेपाली जनताको स्वभाव र रुचिअनुसार संवाद र सम्प्रेषण गर्ने क्षमता भएका खड्ग ओलीले नेतृत्व दिए । जनताले ओलीको संवाद शैली मात्र मन पराएनन्, उनको नेतृत्वमाथि विश्वास र भरोसा पनि गरे ।
विचरा ती कांग्रेस कार्यकर्ता, जो आफैं पेट पाल्दै रुखलाई छातिमा टाँसेर केन्द्र र उम्मेदवारले गरेका तमाम गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै भोट माग्न निस्कन्छन् । तर पनि, अपमानित हुनुपर्ने विडम्बना किन ?
नाकाबन्दीमार्फत् आम पहाडिया जनताबीच अलोकप्रिय थियो, भारत । र, अमानवताको ‘सिम्बोल’ पनि थियो भारत । नेपाल र नेपालीको दुश्मनको रुपमा भारतको चित्रण भयो नाकाबन्दीपछि, जुन स्वाभाविक पनि थियो ।
यसरी शत्रु किटान गरिसकेपछि त्यत्तिकै शक्तिशाली मित्र पनि अगाडि ल्याउन जरुरी थियो र यो भयो पनि चीनको रुपमा । चीनलाई तानेर स्वाभिमानी नेपाली र स्वतन्त्र नेपाल राख्न सक्छु भनी ओलीले आफ्नो छोटो समयको प्रधानमन्त्रीकालमा उदाहरण अगाडि सारे ।
भारत सांस्कृतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक रुपबाट नेपाल र नेपालीको मित्र भए पनि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको मित्र देश चीन मात्र हो भन्ने कुरा खड्ग ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनपछि बडो सुविचारित किसिमले नेपाली जनताबीच स्थापित गर्न नेकपा एमाले सफल भयो ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापतिज्यू,
एउटा चुनावले राजनीति समाप्त हुँदैन । तर, जनताको अभिमतपछि तपाईंको मन्त्रीमण्डलबाट भए/गरेका काम कारवाहीले कसरी कांग्रेसजनले यो पार्टीलाई ‘डिफेन्ड’ गर्न सक्छन्, यसको हेक्का भने तपाईंबाट पटक्कै नभएको देखियो ।
सर्वप्रथम तपाईंले उम्मेदवारी दिएपछि तपाईं काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हो । तपाईंको पार्टी निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि तपाईंको जिम्मेवारी सत्ता हस्तान्तरणमा मात्र सीमित हुन्छ । तपाईं राजनीतिको लडाईंमा जनताबाट पराजित नेता हो । तसर्थ, तपाईंका सञ्चार मन्त्रीले गर्ने प्रेस सम्मेलनलाई लोकतन्त्रको मजाक भन्दा हुन्छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले गरेका काम राष्ट्रपतिले रोक्ने कार्य पनि संविधान सम्मत होइन भनेर तपाईंले खड्ग ओलीलाई भन्न सक्नुपर्छ । अनि, विपक्षबिनाको राष्ट्रियसभा कस्तो होला भनी सहज संवाद र सूचना गर्न तपाईंलाई कुनै अवरोध छैन ।
तर, निर्वाचन आयोगले गर्ने काम तपाईंले गर्नु शोभनीय होइन । राजनीति गर्ने मान्छेले धेरै कानूनी जटिलता समातेर सत्तामा टाँसिनु अशोभनीय मात्र होइन, निन्दनीय पनि हो ।
निर्वाचनका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रसामु धन्यवाद दिएर प्रष्ट भन्नुहोस्, ‘म निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्छु’ भनेर । राष्ट्रियसभाको कुनै औचित्य सरकार निर्माणमा छैन ।
कांग्रेस सबै गुमाएर पनि सत्तामा टाँसिन चाहन्छ भन्ने सन्देशले भविष्यमा यसको पुनर्जीवनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । तपाईंलाई म ‘नोकिया मोबाइल’को दिवालियापनको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई नोकिया हुनबाट जोगाउन सल्लाह दिन्छु ।
काउन्टर रणनीति तय गरौं भन्ने कुरामा सुन्ने मात्र काम भयो, गर्ने काम नभएकाले कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी पराजय भयो
कुनै समय थियो, मोबाइल भनेको नोकिया भनेर बुझिन्थ्यो । नोकियामा बोसो चढ्यो, स्मार्ट भएन, जनताले रिजेक्ट गरे । हार्डवेयरले मात्र नोकिया चलेन । समय सफ्टवेयरको आउँदा पनि नोकिया रुपान्तरित भएन । एक दशकअघि विश्वमा ७० प्रतिशत मानिसले प्रयोग गर्ने नोकिया मोबाइल आज ब्रह्मनालमा छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, नोकियाको पतन र कांग्रेसको अहिलेको अवस्थामा खासै फरक छैन ।
माथि नै भनियो, मैले सच्चा कांग्रेसलाई ऊर्जावान पाएको छु, कांग्रेसको पराजयमा । लोभी पापी, चोर, डाँकालगायत स्वार्थी समूह अब कांग्रेसबाट छुट्टनिेछन् । र, कांग्रेसभित्र कांग्रेसजन गौरवान्वित हुनेछन् ।
पाँच वर्षको वाम सरकारपछि गौरवसाथ कांग्रेसजनले भन्नेछन्, ‘अब कांग्रेस सरकार ।’ कमसे कम त्यत्ति भन्ने ठाउँ त प्रधानमन्त्रीज्यू तपाइर्ंको पुस्ताले कांग्रेसको भावी पुस्तालाई देओस् !
अन्त्यमा, कांग्रेसका नेताहरुलाई देशको ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्ने मात्र फुर्सद नभएको होइन, सुन्ने पनि मैले फुर्सद र धैर्य देखिनँ । यो मामिलामा तपाईंसँग मेरो कुनै गुनासो छैन किनकि मैले समयमै तपाईंलाई सुनाउने मौका पाएको थिएँ । तर, काउन्टर रणनीति तय गरौं भन्ने कुरामा सुन्ने मात्र काम भयो, गर्ने काम नभएकाले कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी पराजयमा यी कुरा अभिलेखीकृत गर्न चाहेको हुँ ।
भुकम्प पिडीतमा छैन हर्ष, खुला आकासमै बित्यो ३ बर्ष
साईकल र ईन्जिन फरक कुरा हुन्
यसकारण हुदैन नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्बाचन प्रणाली
शक्ति पिठ गुप्तकालीका मन्दीर दशैको विशेषता फुलपातीमा सरुङ खेल
कालीसँग गुराँस टिप्दै आए राजकुमार लामा (भिडियो सहित)
औद्योगिक विकासको मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग
अनुपमको शुभकामना आदानप्रदान